जनकपुरधाम । धनुषाको हँसपुर नगरपालिका वडा नं. ७ को नौवाखोरमा सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
श्री संतलाल यूवा कल्बको आयोजन तथा राजवंशि मंडलको नेतृत्वमा सम्पन्न एक दिने सरसफाई कार्यक्रमा कल्बका पदाधिकारिहरुका साथै स्थानिय करिब सय जनाको सहभागीता रहेको थियो ।
वडा नं. ७ मा रहेको कुटि, पोखरि, विद्यालय, बजार सहितमा सरसफाई गरिएको थियो ।
सरसफाई कार्यक्रममा बोल्दै राजवंशि मंडलले पटक – पटक यो कार्यक्रमको आयोजना गरिने बताउनुभयो ।
सरसफाईमा सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै मंडलले आ आफनो घरबाट भएपनि यस कामको शुरुवात गरिनुपर्ने बताए । साथै वहाँले प्लाष्टिक जन्य वस्तुको प्रयोग नगर्न र जताततै नफाँल्न स्थानिय हरुलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । मंडलले खास गरि यस्तो कार्यहरुमा यूवाहरुको संलग्नता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सरसफाईकर्ताहरुले पनि हामीसबैलाई एकजुट भई यस अभियानमा लागनुपर्ने र यो एउटा सराहणिय काम रहेको धारणा राखेका थिए ।